Hong Kong Tower yi 5 umdlalo slot esondweni elibonelela kwi enkulu kunye neempawu ezahlukeneyo bonus kule game. le kwiindawo zokubeka free ijikelezisa nabaqhubi mdlalo esekelwe kumxholo entle kweenqaba ezinde ezintathu kwisixeko metro ka Hong Kong. Ulungelane umzi ngaphantsi nenqaba enkulu kunye izandi omoya, traffic ngezantsi kunye namapolisa / ambulensi kwakhala ukwenza izinto ngokugqibeleleyo lo mxholo. Kukho cool iziphumo isandi kunye umculo xa reel spin. Lo mdlalo udlalwa nge mali Ubhejo ukusuka £ 0,20 ukuya £ 100 ukuba min & max of the game.
le bayazibuza kwiindawo zokubeka free ijikelezisa nabaqhubi umdlalo waphuhliswa elk, omnye vulindlela kushishino slot yekhasino kunye imidlalo eziliqela ethandwayo idlalwa kwihlabathi lonke. imidlalo zawo wadala ngokusebenzisa ubugcisa gaming mihla evumela abasebenzisi ukudlala ngazo kuyo nayiphi ikhompyutha okanye isixhobo esiphathwayo.
le elimangalisayo kwiindawo zokubeka free ijikelezisa nabaqhubi mdlalo udlalwa kunye neempawu ezifana tree bonsai, igolide ihonjiswe 7, Lotus pink nedayimani. 7 ngegolide i isimboli neliphezulu kunye 1500 amaxesha isibonda wakho ukuba amavoti 5 wabonakala phezu kumgca esebenzayo. Kukho ezintlanu imiqondiso random Chinese esekelwe ukuba abo ezisezantsi-value. Uphawu Umdlalo logo, oluhlaza yin-yang, kunye ebomvu yin-yang na iisimboli ezintathu ibhonasi kule game slot.
Mystery Bonus: I-logo Umdlalo lo uphawu mfihlelo kwaye kuthiwa ngaloo ndlela kuba awusoze uyazi ukuba isimboli aveza emva reel bayeke ukujikeleza. amanani amaninzi ezi mpawu onokuchaza umqondiso omkhulu-value ukuba ukunikela kwi big okanye ibe blue ibhonasi yin-yang ukuba uvule jackpot umdlalo icala zikujikeleze enkulu ngokuthatha.
siwachithe Bonus: I elibomvu yin-yang i isimboli usichithachithe yale kwiindawo zokubeka free ijikelezisa nabaqhubi umdlalo kunye kulotywe ezintathu okanye ngaphezulu kule uya kuxhokonxa entry game ibhonasi. Kwakhona ezine okanye ezintlanu kulotywe aya kukunika ubomi omnye okanye emibini engaphezulu ukuze isetyenziswe ngexesha jackpot ngeenxa ekuvumela ukuba phambili ngokwakho kumanqanaba elandelayo.
Bonus Sky Wheels: Kukho amavili ezintathu phezu kweenqaba, ngalinye kumanqanaba ahlukeneyo kwezabelo ukuba iphumelele. Ivili blue ovuthayo inikeza izikhonkwane ukusuka 200 ukuze 2000, linikeza ivili eluhlaza 500 ukuze 10,000 kwaye ivili yokugqibela ebomvu inika ngezibonda elikhulu 2000 ubuncinane ku 50,000.
isishwankathelo: le elimangalisayo kwiindawo zokubeka free ijikelezisa nabaqhubi umdlalo iza kwizibonda edl enkulu ukuba angenza ube ngusozigidi yethutyana ukuba win kunye bet mali max of £ 100.